အကြောင်းမလှ သူများနှင့် … စကားလက်ဆုံကြခဲ့ခြင်း … ( ၁ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အကြောင်းမလှ သူများနှင့် … စကားလက်ဆုံကြခဲ့ခြင်း … ( ၁ )
အကြောင်းမလှ သူများနှင့် … စကားလက်ဆုံကြခဲ့ခြင်း … ( ၁ )
Posted by fatty on Nov 30, 2010 in Community & Society, Drama, Essays.., Opinions & Discussion | 18 comments
လျှောတံခါးလေးတွန်းဖွင့်ပြီး ၀င်လိုက်တော့ … အခန်းထဲမှာလင်းထိန်နေသည်။ အော် အပြင်ကကြည့်တော့မှန်အမျိုးအစားက အတွင်းကိုဖေါက်ပြီးမမြင်ရ။ အထဲမှာ မိန်းကလေးတွေ အနဲဆုံး ၁၀ ယောက်လောက် ထိုင်နေကြတယ် …။ လာ ..လာ ..အကို ရေသောက်အုံးမလား ခဏထိုင်ပြီး အမောဖြေပါအုံးလား …။
ဘယ်သူနဲ့ဝင်မလဲ … ၀င်နေကြရှိလား …။ မရှိပါဘူးဗျာ အနှိပ်ကောင်းကောင်း နှိပ်တတ်တဲ့သူ တယောက်လွှတ်ပေးဗျာ …။
ဟဲ့ … အိုက်စံ ..ဒီအကို ကို အခန်းပြလိုက် ..။ အကိုဒီကိုလာဘူးလား … အကိုဝင်နေကြရှိရင် ခေါ်ပေးမယ် .. အားမနာနဲ့ .. အကို့အတွက် စပယ်ရှယ်အခန်းလုပ်ပေးမယ် ..။
ကျနော်ကတော့ ပထမဆုံးလာဘူးတာမို့ ( ယုံချင်မှယုံ ) လာသာလာရတယ်မျက်နှာတော့ ခပ် အန်းအန်းဗျ ..။ တကယ်.. ခုနကဖြတ်လာတဲ့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ကောင်မလေးတွေ
ထိုင်နေကြတာများ … ၀တ်စားထားတာ နတ်ဘုံနတ်နန်းရောက် နေသလားမှတ်ရတယ် ..။ကျနော်ဆိုတဲ့ကောင်ကလဲ ဒီိလိုနေရာမျိုး လာသာ လာရတယ် ခပ်ရှက်ရှက်ရယ် ..။
တကယ်ပါ …။ တချို့ဆို ဧည့်ခန်းထဲ မှာကျကျနန ထိုင်ပြီးမှ ကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကို … အသေအချာကြည့် … တချို့ကလဲ ပုခုံးပေါ်မှာ ကြိုးစ သွယ်သွယ်လေးဘဲရှိတယ်
တချို့ကြပြန်တော့ .. ဘောင်းဘီတိုတိုလေး ၀တ်ပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ချိတ်ပြီး စတိုင်ကျကျပေါ့ဗျာ …။ တချို့ကြတော့ လည်ပင်းကို စပါယ်ရှယ် ဟိုက်ထားကြလေ၇ဲ့။
မင်းနာမည်အိုက်စံလား … ကျနော့်လိုက်ပို့တဲ့ကောင်လေးကို စပြိး မိတ်ဆက်ထားရတယ်လေ …။ မင်းတို့ဆီက သဘောလည်းကောင်း အနှိပ်လည်းကောင်းတဲ့ …
ဟိုကွာ … ချောလဲချောချောလေးပေါ့ ..ငါ့ကိုရွေးခေါ်ပေးကွာ ..ရော့ ..မင်းအတွက် ..။ ကျနော် ၅၀၀ တန် တရွက်သူ့အိပ်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် ..( ကုန်ကျစားရိတ်
အခန်းထဲမှာတော့ မှို့ယာ ခေါင်းအုံး TV အဲယားကွန်း အစုံပေါ့ဗျာ … အကိုခဏစောင့်နော် လာပါလိမ့်မယ် …။
ခဏနေတော့ ကလေးမလေးတယောက်ဝင်လာသဗျ …။ ကျနော့ ခြေရင်းဘက်ထိုင်လိုက်ပြီး … အကို ဘယ်နှစ်ချိန်လဲတဲ့ …။ ကျနော်က လဲ စကားလေးဘာလေးပြောချင်တာကိုး … ၂ ချိန်ပေါ့ …။
သူလေးက ကျနော့ ခြေဖ၀ါးနှစ်ဘက်လုံးကို snowtower နဲ့ အရင်သုတ်ပါတယ် …။ ပြီးတော့ ခြေဖ၀ါး ..ခြေချောင်းလေးတွေ နှိပ်ပါတယ် ..။
သမီးနာမယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ … သမီးက ကြည်ပြာပါ …။ ဟုတ်လား .. သမီးဒီရောက်တာဘယ်လောက်ကြာပြိလဲ …။ ၁ နှစ်ကျော်ပြီ ..။
အော် အဆင်ပြေလား သမီးဒီမှာ လုပ်ရတာ …။ ပြေတယ်ရယ်လို့လဲ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ …။ အခုတလော ဧည့်သည်က အကျနဲတယ်လေ .. သမီးဆို အခုမှ တယောက်
ဘဲရသေးတာ …။ ဒီမှာ အားလုံး ၂၀ ကျော်တယ် ဦးရဲ့ ..။ စခေါ်တုံးကတော့ အကိုတဲ့ …မီးကလဲမှိန်တော့ ကျနော့ကို ကောင်းကောင်းမြင်ပုံမရဘူးဗျ ..အဟဲ ..။
အနီးရောက်တော့မှ ကျနော့အသက်အရွယ် မှန်းမိသွားပုံရတယ် ..။ ဦး ..တဲ့ ။
ထားပါလေ …. အဲဒါတွေ ။ သူကလေးက ECO first year distant တက်နေသူလေးပါ …။ ဒီကနေ့ ဘာဟင်းနဲ့စားလဲဆိုတော့ .. ပဲပင်ပေါက်ပဲပြားကျော် တဲ့ မနက်ရော ညနေရော ဒါဘဲတဲ့ဗျား …။ မစားနိုင်တဲ့သူက အပြင်က နဲနဲပါးပါး ၀ယ်စားရတာပေါ့တဲ့ ..။ တနာရီကို ၃၀၀၀ ပေးရတယ် တစက်ရှင်ခေါ်တာပေါ့ …။ သူတို့အတွက်က
၅၀၀ ရတယ် ..။ တလကို ပျမ်းမျှ ၇၀၀၀၀ ကျပ်လောက်ရတယ်ပြောတယ် ….။ သူတို့အလုပ်နဲ့ စက်ရုံအလုပ်သမလေးတွေဘ၀ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြတာပေါ့။
သူတို့လေးတွေဘ၀ထဲမှာ … ခဏလာခိုသူတွေ ရှိသလို … အပြီးလုပ်စားနေသူတွေလဲရှိလေ၇ဲ့ …။ အပြီးလုပ်စားတဲ့သူတွေကြတော့ အနှိပ် တင် မကတော့ပါဘူး
ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပါ ရင်းရတော့တာပါ …။ ခဏနားပါမယ် ။
မှတ်ချက်။ ။ အယ်ဒီတာမှ ဓါတ်ပုံကို မျက်နှာဖျက်လိုက်ပါသည်။
ဟင်း…….အဲ့လိုသတင်းကြားရတာစိတ်တော့မကောင်းပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့လေ ကျွန်တော် တခုတော့ပြောပါရစေ စိတ်တော့မဆိုးပါနဲ့နော်။အဲ့ကောင်မလေးရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ပြင်ချင်ရင်တောင်မှ Media စည်းကမ်းတခု(သို့)သူမ၏အ၇ှက်
ကိုငြဲ့ညှာတောအားဖြစ် မျက်နှာလေးကိုဝါးဝါးလေးလုပ်ပေးထားစေချင်တယ်ဗျ။သူ့နေရာကနေ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်တာပါ
ပုံကြည့်ရတာတော့ .. ပြောပြီးရိုက်ထားတဲ့ပုံပါပဲ..။
ဒါမျိုးတွေက နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့.. မြန်မာပြည်က ယဉ်းကျေးမှုမျက်နှာဖုံးတပ်ပြီး .. အကုန်နောက်ကခိုးလုပ်နေတာဖြစ်နေတာမို့ .. တခုခုတော့ ၀ိုင်းစဉ်းစားပြင်သင့်ပြီထင်မိပါတယ်..။
ယုအက်စ်မှာဆို .. ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆို ….ဘေးအိမ်တွေမှာ ခွင့်ပြုချက်တောင်းရတယ်..။
မြန်မာပြည်မှာဆို ..ဘေးမှာဒါမျိုးအလုပ်ရှိရင် .. အမျိုးကောင်းသမီးတွေပါ ..အထင်လွဲခံရနိုင်တာရှိတာမို့ ..ဒါမျိုးတွေ လိုင်စင်နဲ့ တရားဝင်နေရာသတ်မှတ် ပေးလုပ်သင့်တယ် ..ထပ်ခါပြောကြည့်နေတာပါ..။
ဘယ်ဥပဒေပြုသူကမှ မစဉ်းစားပေးရင်.. မီဒီယာက ကြားဝင်လုပ်သင့်. ဖွသင့်နေပါပြီ..။
အနုပညာလောကနဲ့ မိုဒယ်လောကထဲဝင်ပြီး .. ဒီလိုအလုပ်လုပ်(အဆင့်အတန်းရှိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး)လုပ်စားနေသူတွေရဲ့ သူဌေးတွေအိမ်..။ အာဏာရှိသူတွေအိမ်အ၀င်အထွက်.. ပေးရတဲ့ငွေကြေးအထိ ..လိုက်စုံစမ်းပြိး ..မီဒီယာပေါ်ပစ်တင်ဖို့ကောင်းတယ်..။ ပါပါရာဇီဆိုပေမဲ့ ဒါက ဒီလို ဥပဒေအပေါ်ေ၇ာက်ပြီး ဗရမ်းဗတာအခြေအနေမျိုးမှာ ထိမ်းကြောင်းမှုဖြစ်စေနိုင်တာပဲ။
မြန်မာပြည်တွင်းက ဂျာနယ်တွေလည်းလုပ်သင့်တယ်.. ။
ကောင်းတယ်..။ အကုန်မီဒီယာပေါ်သာ ဆွဲတင်လိုက်..။ အလိုလို ချိန်ဆညှိနှိုင်းရတာတွေထွက်လာမှာပဲ..။ ဒါက မီဒီယာနဲ့ အခြေခံအလုပ်ပဲ..။
ကိုယ့်လူ post က ကြော်ငြာ နေသလို ဘဲ။ ဓါတ် ပုံ တော့မတင် သင့်ပါ ဘူး။ြ။
ဒီလို အလုပ်မျုိးကို ဘယ်အမျိုးကောင်းသားသမီးမှ မလုပ်ချင်ပါဘူး။
ဒါပေမယ် ဒီလို ငွေအရလွယ်သော လုပ်ငန်းများကိုသာ မက်မောတွယ်တာနေသူ
ဒီဘ၀ ဒီနွံထဲကနေ ဆွဲထုတ်ဘို့ကြိုးစားပေမယ့် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်က ဒီနွံထဲမှာပျော်နေတာတွေလည်အများကြီးရှိပါတယ်။
ဒီလိုဘ၀မျုိးတွေအကြောင်းကို အရင် က စမ်းစမ်းနွဲ့သာယာဝတီက ခေါက်ထီးလေး မလုံ့တလုံ ဆိုပြီး စာဖွဲ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။
တကယ်ပြောရရင် ရိုးရိုးသားသား လုပ်စားချင်သူများအဖို့ များများမရပေမယ့် လုပ်စရာအလုပ်တွေရှိပါတယ်။
ပိုက်ဆံကိုသုံးနိုင်တဲ့ လူတွေရှိလို့ ဒီလိုနေရာတွေရှိတာလား ဒီလိုနေရာတွေရှိလို့ ဘဲ ပိုက်ဆံသုံးကြတာလား ဘယ်ဟာက မှန်လဲတော့ မသိဘူးဗျာ။
ရွှေလီမှာတုံးကတော့ ပြည့်တန်ဆာတန်းကို တရားဝင်ဖွင့်ပေးထားတာ တွေ့တာဘဲ။
ဈေးတန်းထဲ့ အခန်းတစ်ခုရဲ့မီးရောင်အောက်မှာ ကောင်မလေးတွေထိုင်ခိုင်းထားပါတယ်။
ဒီမှာတော့ တရားမ၀င်ပေမယ့် တရားဝင်လောက် ဖြစ်အောင် အလှပြင်ဆိုင်အရေခြုံလို့ လုပ်စားကြပါတယ်။
ခေတ် စနစ် ကြောင့်မဖြစ်ချင်ဘဲဖြစ်သွားရတဲ့သူတွေလဲရှိမှာပါ ကိုပေါက်ရယ် အခြေခံလစာ သုံး လေး သောင်းနဲ့တယောက်လုပ်စာတယောက်အနိုင်နိုင်ရယ် သက်ကြီးရွယ်အို ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့မိဘ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ မောင်ငယ် ညီမငယ်တွေရှိတဲ့မိသားစုဆို ဒီအလုပ်မျိုးလုပ်မိကြမှာပါ နောက်တော့မထူးတဲ့ဘဝ ရောက်ကြရတာတွေလဲရှိမှာပါ စိတ်မကောင်းစရာပါ…..
တရားဝင်လုပ်ခွင့်မပေးနိုင်တောင်မှ သူတို့လေးတွေရတဲ့ အခကြေးငွေကို ထိုက်သင့်သလောက် ရအောင် ကြိုးပမ်းသင့်ပါတယ်။ ခက်တာက အဲဒီလောက် စာနာရကောင်းမှန်းသိရင် မြန်မာပြည်ရဲ့ လူမှုဒုက္ခ တဝက်လောက်က သက်သာတေပြီလေ။ အခုတော့ တလခုနှစ်သောင်း ဝင်မှန်းတောင် သိသွားရင် အခွန်များ လိုက်နေအုံးမလား မသိဘူး။ ယူအက်စ်ကို ဟိုတလောက နယ်စပ်က ပြောင်းရွှေ့ခိုလုံသူတွေ အလုံးအရင်းနဲ့ဝင်လာတော့ တချို့သော ဆူရှီးဆိုင်ပိုင်ရှင် ကိုကိုမမများက အချင်းချင်း ဘာပြောတယ် မှတ်သလဲ။ အခုဝင်လာတဲ့သူတွေကို လုပ်ခအများကြီးလဲပေးစရာမလိုဘူး။ တလ တထောင်လောက်နဲ့ စား၊နေအပြီးဆို ရတယ်တဲ့။ ကျွေးတော့လဲ ငါးပိရည်သာ ပါပစေ ပြီးတယ်တဲ့။ အဲဒါ ယူအက်စ်မှာ ကြီးပွားနေတဲ့ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များနော်။ မျက်စိပိတ်နားပိတ် ပေါင်းရိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်းမှာဆိုတော့ ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်လို့ ညည်းနေကြမှာပါ။ တကယ်တော့ ဆူရှီးလိပ်သူတွေဟာ တနေ့ကို ထမင်းစားချိန် ၁နာရီအနားကလွဲရင် ၁၁နာရီ၊ ၁၂နာရီ လုပ်ကြရတာပါ။ ပေးတော့လည်း အသစ်ဆို ၁၂၀၀ လောက်၊ တနေ့ဘူး ၇၀လောက် လိပ်နိုင်တယ်၊ ဆိုင်အသေးကို တဦးထဲ လွှဲထားနိုင်ပြီဆိုမှ ၁၆၀၀၊ ၁၇၀၀ လောက် နေစားအပြီး ပေးတာပါ။ ယူအက်စ် အလုပ်သမားဥပဒေက ပြဌာန်းထားတဲ့ အချိန်ပိုတို့၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတို့ ဆိုတာ နထ္တိ။ ဒါမျိုးတွေက ဆူရှီးပိုင်ရှင်တွေမှ မဟုတ်ဘူး အခြားသော လောင်ဒရိုမတ်၊ ဒရိုင်းကလင်း စတဲ့ မြန်မာပိုင်ရှင်များလည်း ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲသာများပါတယ်။ သူတို့သာ အိမ်တလုံးက နှစ်လုံး ဖြစ်သွားတယ်၊ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကတော့ ပေးသမျှယူ၊ မကျေနပ်ရင်ထွက် နောက်တလုပ် ရှာကြဖို့ ပဲရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ အကျင့်ပါနေလို့ ဘာလို့နဲ့၊ ယူအက်စ်မှာကြ တော့လည်း ပြင်တာ မတွေ့ရပါဘူးဗျာ။ အင်းလေ မြန်မာတွေ ပြင်ရကောင်းမှန်းသိနေရင်လည်း တိုင်းပြည်ကြီး ဒီမိုကရေစီရလို့ စစ်တပ်က နောက်တခါတောင် အာဏာသိမ်းဖို့ ဆိုင်းပြင်းနေလောက်ရောပေါ့နော်။
Massage မှမိန်းကလေးတော်တော်များများသည် အမှန်ကို မပြောတတ်ကြပါ….ဥပမာ(နာမည်၊စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သောရက်၊ ကျောင်း)
ဆရာကြီး မဟုတ်ပေမယ့် တော်တော်များများလိမ်တာကို ခံခဲ့ဖူးပါသည် ။
သူတို့ဘ၀နှင့်သူတို့တော့ဘယ်လိုနေမယ်မသိပေမယ့် စာနာမိပါတယ် ။
တစ်ခါက သူငယ်ချင်းက သနားတယ်ဟုဆိုကာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အဲဒီလောကထဲကနေ အရင်းနှီးပေးပြီး ဆွဲထုတ်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီမိန်းကလေး နောက်ဆုံးတော့လည်း အဲဒီ ၀ဲဂယက်ထဲကိုပဲပြန်လည်သွားတာပါပဲ…
စနစ်မကောင်းတဲ့ဟာကြောင့်လည်း ပါမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ နောက်ပြီးလူတစ်ယောက်ရဲ့ပိုက်ဆံအလွယ်လိုချင်တဲ့စိတ်ကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်တယ် …
မိန်းကလေး ဘ၀ကိုစာနာတဲ့အနေနဲ့ ဓာတ်ပုံတော့ မတင်သင့်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ကျောင်းပြီးခါစ .. ဟောက်စ်ဆင်းနေတဲ့ ဆရာဝန်မိန်းကလေးတယောက်ဟာ ..တလ၁သိန်းတော်တော်ရှာယူရချိန်မှာ ..သူတို့က .. ၇သောင်းအသာကလေးရပါတယ်..။
ရုပ်ကလေးနည်းနည်းရှိပြီး ..လည်ဝယ်တဲ့မိန်းကလေးဆို .. ဒန်ဆာ..အဲဒီကနေ မိုဒယ်လောကထဲဝင်လိုက်.. သိန်းဂဏန်းဆိုတာ ..တခါဈေးဝယ်ထွက်စာဖြစ်သွားရော..။
ဒီတော့ ..ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်စားနေသူတွေ။ ကိုယ့်စာရိတ္တနဲ့မလဲတဲ့သူတွေနဲ့ ခြေရာလာတိုင်းတယ်..။ ရှေ့ ကစံပြဖြစ်နေတယ်..။
ဆရာဝန်မနဲ့ .. ဒန်ဆာမိန်းကလေး… ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀ကို ယှဉ်ကြည့်ပါဦး..။
ဒီအလုပ်တွေကို .. နောက်ကနေ လုပ်ခွင့်ပြုထားတာဟာ .. ပညာရေး။လူမှုရေး၊ အကျင့်စာရိတ္တတွေမှာ အထွေထွေပျက်စီးမှုတွေဖြစ်စေတာပဲ..။ လူငယ်တွေဘ၀ အလုံးသုဉ်ပျက်တော့မှာပေါ့..။
ဒါကို သေသေချာချာကို လုပ်မှဖြစ်တော့မယ်လို့ထင်တယ်..။
ရန်ကုန်သွား..ကြိုက်တဲ့တက်ခါစီတက်စီး..။ မေးလိုက်… တန်းစီနေပါတယ်..။
ကြိုက်တဲ့စားသောက်ဆိုင်ဝင်ထိုင်… ဘီယာမှာသောက်ရင်..တွေ့တဲ့စားပွဲထိုးမေးလိုက်… အယ်လ်ဘန်ပါထွက်လာလိမ့်မယ်..။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ … နိုင်ငံခြားဧည့်သည်တွေသာ တိုင်းပြည်ထဲလှိမ့်ဝင်လာလိုက်..သူတို့တွေဝင်ငွေ ၃-၄ဆတက်လို့ … ..ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့နိုင်ငံ.. တန်းကျော်ရောက်သွားလိမ့်မယ်..။
လူ ပုံ တင် ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြသနာတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်
သူ့ အလုပ်ရှင် သူဌေး , ရဲ , ထောက်လှမ်းရေး, လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်,ခေါင်း၊စသည်ဖြင့်ပေါ့
သူ့ မိသားစုနဲ့ပတ်သက်သူတွေ သူနဲ့ပတ်သက်သူတွေ ဒီpost ကို မဖတ်မိဘူးပြောလို့မှမရတာ
အဆိုးတွေအများကြီး ဖြစ်လာ စရာရှိပါတယ် လူပုံတွေရှောင်တင်တာ ကောင်းမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်
ကိုခိုင်ရေ ကိုဖက်တီးက သတင်းကို ကွင်းဆင်းပြီးယူလာတာနော် ။ တာဝန်သိသိအချက်နဲ့လက်နဲ့ သတင်းယူလာတာ …။ ပေးလိုက်လေ တစ်ဆက်ရှင်ကြေးလောက်